Hurghada, Red Sea Governorate, i-Egypt
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Maged
Itholakala ngaphansi kwemisebe yelanga unyaka wonke ikujabulisa ngama-beach vibes. Amamitha angu-140 nje nesihlabathi esithambile esinyakazayo phakathi kwezinzwane zakho ogwini oluyimfihlo lwe-Mangroovy lokufinyelela mahhala. Ukufinyelela kalula nangokushesha kuzo zonke izindawo ezishisayo nezindawo ezizungezile: Iphuli, Ibhishi, Indawo yokudlela & Indawo Yezingane Ezincane Ogwini, Imakethe Encane enesevisi yokudiliva ekhaya, Ukupaka Kwamahhala, ne-Wi-Fi Yamahhala.
Kwanelisa ngokugcwele futhi kuthulisa ingqondo nomoya wakho.
Ifulethi laseVoila Seaview elakhelwe kuphela ukuncintisana ngobuhle bolwandle, ikhishi lepulani elivulekile elinebha eseceleni evezwe egumbini lokuhlala lapho ongajabulela khona umbono we-panoramic wechibi elikhulu kunawo wonke e-El Gouna nezintende zezandla ezifika esibhakabhakeni kanye nokudlidliza kolwandle.
Ngiyajabula ukukubungaza ekhaya lami le-Voila Comfy-Cozy futhi sabelane nawe amazwibela okuthi yini & kanjani ukuze ujabulele i-El Gouna.
I-HDTV ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Netflix
Voila endaweni yami siqu yasekhaya; uzothola indawo yakho yasekhaya ethokomele ithandeka kuzo zonke izidingo zakho. Ukubuka kolwandle kanye namamitha angu-140 ukuhamba ukuze uzwe isihlabathi phakathi kwezinzwane zakho ogwini oluyimfihlo lwe-Mangroovy
Siyatholakala 24/7 ukuze uthole usizo lwakho futhi sikwenze uzizwe usekhaya
UMaged Ungumbungazi ovelele